विश्वविद्यालय विस्कन्सिन म्याडिसन को - Study in USA with Education Bro
विश्वविद्यालय विस्कन्सिन म्याडिसन को
शहर : म्याडिसन
गरयो : आफ्नो
स्थापित : 1848
नबिर्सिनुहोला discuss University of Wisconsin–Madison
विश्वविद्यालय विस्कन्सिन म्याडिसन को मा स्थापित भएको थियो कि एक सार्वजनिक संस्था छ 1848.
विश्वविद्यालय विस्कन्सिन म्याडिसन को मा शिक्षण शुल्क हो $30,000 (Aprox।).
विस्कन्सिन म्याडिसन विश्वविद्यालय म्याडिसन शहर मा पोखरी Mendota को दक्षिणी किनारमा साथ निहित. विस्कन्सिन Badgers भन्दा बढी मा प्रतिस्पर्धा 20 एनसीएए प्रभाग म खेल र ठूलो दस सम्मेलन को भाग हो. विद्यार्थी भन्दा बढी मा मुछिन सक्छन् 800 परिसर मा संगठन. सक्रिय ग्रीक जीवन र परिसर मा सामाजिक दृश्य पनि छ, देश मा शीर्ष पक्ष विद्यालय रूपमा विस्कन्सिन गरेको प्रतिष्ठा प्रस्ट. Freshmen परिसर बस्न आवश्यक छैन, तर धेरै त्यसो गर्न छनौट. विद्यार्थी तिनीहरूले अन्य विद्यार्थी र संकाय संग सिक्न र बाँच्न जहाँ धेरै आवासीय समुदाय को एक बस्न रोज्न सक्नुहुन्छ.
विश्वविद्यालय विस्कन्सिन म्याडिसन गरेको अत्यधिक सब स्नातक विद्यालय को शिक्षा को स्कूल समावेश, रबर्ट एम. ला Follette मुद्रा को स्कूल, इन्जिनियरिङ कलेज,व्यापार स्कूल, School of Medicine and Public Health and Law School. सार्वजनिक सेवाको विद्यालयको पैतृक अन स्थापित भएको थियो “विस्कन्सिन आइडिया” भनेर शिक्षा प्रभावित र कक्षा परे मानिसहरूको जीवन सुधार गर्नुपर्छ. उल्लेखनीय विस्कन्सिन छात्र समावेश प्रसिद्ध ग्लास कलाकार डेल Chihuly र लेखक जइस क्यारोल Oates. अन्य विगतका विद्यार्थीहरू समावेश पूर्व उपाध्यक्ष डिक चेनी, Aviator चार्ल्स लिन्डबर्ग, naturalist यूहन्ना Muir र architect फ्रैंक लयड राइट.
दबाइ & PUBLIC HEALTH
अप्रिल 4, 1892 The first edition of the student-run The Daily Cardinal was published
1909 William Purdy and Paul Beck wrote मा, Wisconsin the UW–Madison athletic fight song
1934 The University of Wisconsin–Madison Arboretum, whose mission was to restore lost landscapes, such as prairies, खोलिएको थियो
तिमीलाई चाहिन्छ discuss University of Wisconsin–Madison ? कुनै पनि प्रश्न, टिप्पणी वा समीक्षा
फोटो: विश्वविद्यालय विस्कन्सिन म्याडिसन को आधिकारिक फेसबुक
Vanderbilt विश्वविद्यालय नेशविल
नर्थवेस्टर्न विश्वविद्यालय इभान्सटोन
क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालय को, लस एन्जलस को Angales
क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालय को, सान डिएगो सान डिएगो